२५ वर्षदेखि बौद्धमा लुकाइएको त्यो साढे २ केजी युरेनियम बारे प्रहरीले पत्ता लगयो यस्तो राज : प्रहरी नै भयो हैरान ! – Enepali Samchar
२५ वर्षदेखि बौद्धमा लुकाइएको त्यो साढे २ केजी युरेनियम बारे प्रहरीले पत्ता लगयो यस्तो राज : प्रहरी नै भयो हैरान !
March 13, 2021 adminLeaveaComment on २५ वर्षदेखि बौद्धमा लुकाइएको त्यो साढे २ केजी युरेनियम बारे प्रहरीले पत्ता लगयो यस्तो राज : प्रहरी नै भयो हैरान !
e nepalisamchaar / काठमाडौं । नेपालमा पहिलोपटक युरेनियम बरामद गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–६ बौद्धबाट महानगरीय प्रहरी कार्यालयको टोलीले बिहीबार साढे २ किलो युरेनियम बरामद गरेको हो । महानगरीय प्रहरी कार्यालयका एआईजी हरि बहादुर पालले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गरेर युरेनियम कारोबार गर्ने ४ जनालाई सार्वजनिक गरेका छन् ।
जानुकाले ससुराले २५ वर्षअघि भारतबाट ल्याएर सो युरेनियम बौद्धस्थित घरमा राखेको प्रहरीलाई साविती बयान दिएकी छिन् । ‘करिब २५ बर्ष पहिले आफ्नो ससुराले भारतबाट युरेनियम ल्याएर राखेको जानुकाको भनाई छ’ महानगरीय प्रहरी कार्यालयका एआईजी हरि बहादुर पालले रातोपाटीसँग भने, ‘हामिले जानुकालाई पक्रेका छौं, थप अनुसन्धान गर्दै छौं ।’
बेच्ने सहमतिपछि उनीहरु ग्राहक खोज्न थाले । रामेछापका २० बर्षीय प्रकाश चौहान र सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका–४ घर भएका २० बर्षीय मनोज न्यौपानेले ग्राहक खोज्न थाले । ‘ग्राहक भेट्टाएपछि उनीहरुलाई नारायण सिंहले २–२ करोड दिन्छु भनेको रहेछ’ एआईजी हरि बहादुर पाल भन्छन् ।
युरेनियमको हल्ला त्यसअघि पनि बेला–बेला आइरहन्थ्यो । जानुकाको समूहले जसलाई बेच्न खोजेका थिए उनीहरु प्रहरीको सम्पर्कमा आए । फागुन १९ मा स्याम्पल मागेर परीक्षण गर्दा सो न्युक्लियर ईनर्जी प्रशोधन नगरिएको युरेनियम–२३८ रहेको खुल्यो । नास्टका वैज्ञानिकले सो ईनर्जीको परिक्षण गरेका हुन् ।
युरेनियम सक्कली रहेको परीक्षणबाट देखिएपछि प्रहरीले सो सुराकलाई पछ्याइरह्यो । जानुकाको समूह र ग्राहकको बीचमा डेढ अरबमा किन्ने–बेच्ने डिल मिल्यो । इमोबाट पैसा देखाएपछि उनीहरु युरेनियम लिएर आए । ग्राहकसँगै प्रहरी पनि पुग्यो । अनि, जानुकाको समूह युरेनियम सहित पक्राउ परे ।
ओलीको कदमले माओवादी केन्द्र पनि आत्तियो, एकाविहानै बसेको आकस्मिक बैठकले गर्यो यस्तो निर्णयहरु
सरकारले ल्यायो यस्तो नयाँ नियम अब काठमाडौं प्रवेश गर्ने नाकामा कोरोना एन्टीजेन परीक्षण( पूरा हेर्नुहोस् )